Eco-saaxiibtinimo White Kraft Paper Waxyaabaha weelasha cuntada
Wadamo badan ayaa soo saaray mamnuucida balaastigga. Duruufahaas awgood, waxaan kugula talinay weelasheena taxanaha ah ee waraaqaha cufka ah ee cadcad ee lagu qalabeeyay dabool sare oo hufan macaamiisha badan, oo sifiican ugu soo bandhigi kara cuntada sanduuqa.
Qaababkeenna gaarka ah ee weelasha cuntada ayaa loogu talagalay inay ku xirxiraan cuntooyinka kala duwan, sida sushi, bento, saladh, rootiga, iwm.
Badeecadani waxay aqbashaa macaamiisha cabbirka la qaabeeyey, qaabka, daabacaadda iyo shuruudaha baakadaha.
Waxaan konteenaradaan ka iibinay Talyaaniga, Spain, Canada, Australia iyo dalal kale. Waxaan ka taxaddarnaa qiimaha ugu fiican ee naqshadeynta hal-abuurka ah si aan uga caawinno macaamilka inuu kaydiyo kharashka oo uu helo marin wanaagsan
Warshaddan 'Brown Kraft Paper Box Box' waxay soo xushay qalab tayo sare leh, qaab dhismeedku waa mid jilicsan oo jilicsan, jilicsan oo siman, si fiican u shaqeynaya, buundooyin badan. Farshaxanimo qaali ah, daaweynta geeska kaamil ah, qurux badan oo waara. Dareenka wanaagsan wuxuu ka dhigayaa sanduuqa hadiyadaha mid sifeysan.
Sanduuqa Sushi ee CHUNKAI ayaa leh faa iido weyn sida hoos ku xusan:
1.Gall Sealling oo loogu talagalay keyd badbaado leh
Qiyaasta kala duwan ee aad dooratay
3.Thicker iyo Waxyaabaha adag
Naqshadeynta 4.Exquisite oo leh qaab qurux badan
5.Antifogging, ka fiican bandhig
Jiingad Paper Fruit Box
Sanduuqan Midhaha ah ee Khudradda Xaashida ah wuxuu leeyahay saddex lakab oo waraaqo jiingado qaro weyn leh, xoog leh oo waara. Hawo-mareennada ayaa loogu talagalay inay ka dhigaan badeecadda mid aan u nuglayn burburka. Daabacaad qaab naqshad leh, oo waafaqsan sawirka cambe, qurux iyo deeqsinimo leh, ayaa kor u qaadaya qiimaha wax soo saarka. Xamili waa macquul macquul ah in design, ma fududa in la jebiyo, oo ma dhaawici gacanta. Sanduuqa waa mid aad u qaro weyn oo adag, alaabta ceeriin-fasalka cuntada leh shahaado FSC, caafimaad iyo jawi saaxiibtinimo, kaas oo la kulmi kara heerka FDA, ammaan iyo wasakhda -free. Qaab-dhismeedka kala-baxa ayaa fududeynaya furitaanka iyo xiridda inta la isticmaalayo.
Brown 3 lakabka jiingado Pizza Box
Sanduuqa Pizza Box ee la daabacay wuu fiican yahay, qaabku waa soo jiidasho, mana sahlana in la libdho. Dusha raaxeysan oo jilicsan, daabac ayaa la habeyn karaa, iyo naqshadeynta godka godka ayaa hubiya in pizza uusan sii xumaan. Sanduuqa ayaa aad u adag, maaddooyin ceeriin ah oo heer-cunto ah, caafimaad qaba oo bey'adeed u roon, kaas oo la kulmi kara heerka FDA, oo ammaan ah oo aan wasakh lahayn. Qaab-dhismeedka kala-baxa ayaa fududeynaya furitaanka iyo xiridda inta la isticmaalayo.
Weelka Cunnooyinka ee Nooci kara
Dhalo caag ah Dhismaha Fiber Powder
Dhaladaan Balaastikada ah ee Timaha Caaga ah ee Fiber Powder ah ayaa hada ku kulmaya Aasiya. Waxaan ku bixin karnaa qiime aad u adag oo loogu talagalay dhaladaan, sababtoo ah waxaan iska indhatirnay oo aan kor u qaadnay nafteena. Marka, haddii aad rabto inaad iibsato Dhalo Caag ah Dhismaha Fiber Powder Dhalo raqiis ah, kan ayaa noqon doona dookhaaga ugufiican.Waxaan dhaladaan ka iibinay USA, Ruushka, EU iyo dalal kale.Waxaan ka taxadaraynaa qiimaha ugu fiican naqshadeynta hal abuurka ah si loo caawiyo macmiilku wuxuu kaydsadaa kharashka oo uu ka helaa wax fiican.
500ml Matte Black Glass Buufiyo Dhalo
Dhalada 500ml Matte Black Glass Spray waa mid aad u qurux badan, oo ku habboon dhammaan noocyada dareeraha ah. Dhalooyinka Madhan ee Buufi Kara Dhalada ah ee 4 Pack 16 oz oo loogu talagalay Saliida Aasaasiga ah, Udugga, Nadiifinta Alaabada, Cadar, Aalkolo Sterilizer, oo leh 4 Buufayaal Bilaash ah, 4 Koofiyadaha .Bakhshadda Waxaa kujira --- 4 Xidhmo 16 oz Dhalo Buufi ah oo leh Muusig Caag ah oo Saliid ah oo Muhiim ah, 4 Caag oo Dhalo ah iyo 8 PC Calaamado nuurad madow ah oo loogu talagalay Isku Darka, Alaabada Nadiifinta ee Guriga lagu Sameeyo. Dhalo weyn oo ah 16 wiqiyadood oo ah buufin dhalo ah oo si fudud loo jiido oo loo rogi karo ha ahaato ceeryaamo ama durdur xoog leh.Waxaan u habeyn karnaa midabka dhalada, sidoo kale ku calaamadeyn karnaa ama calaamadeyn kartaa dhalada ama daboolka.